You are here: Home / Blog / Farqiga u dhexeeya xanuun iyo cudur (disease and infection)
Marka laga hadlayo ama wax laga qoraayo arrimaha caafimaadka la xidhiidha waxa aad loo isticmaalaa erayo badan oo ku kala duwan xagga macnaha, ujeeddada iyo cilmi ahaanba. Tusaale ahaan waxa ka mid ah erayadaas la is dhex dhigo xanuun iyo cudur oo marka la adeegsanayo inta badan si aan sax ahayn oo aan haboonayn loo isticmaalo isla markaana aan loo adeegsan meesha ay ku habboon yihiin oo ay macnaha buuxa ku samaynayaan. Xanuun iyo cudur waa laba eray ama magac oo kala duwan kalana miisaan weyn isla markaana leh macnayaal kala jaad ah.
Erayga xanuun ama jirro waa erayga ugu miisaanka culus oo aasaaska u ah isla markaana ay ka soo farcamaan erayada ay ka midka yihiin: cudur, bukaan, caafimaad darro, xanuun iwm. Sidaan hore ugu soo aragnay macnaynta iyo qeexitaanka caafimaadku inay adag tahay, ayaa waxa kale oo adag macnaynta iyo qeexitaanka xanuunka halka ay fududahay in la fahmi karo xanuun. Sidoo kale aadanuhu waa ku kala aragti iyo fahan duwan yahay waxa xanuun yahay iyo waxyaabaha keena xanuunka marka laga eego dhinacyada aqoonta, garaadka, bulshada, dhaqanka, degaanka iyo xagga diinta ay aamminsan yihiin.
Tusaale ahaan waxyaabaha Soomaalidu rumaysan tahay ama aamminsan yihiin in ay xanuunka yihiin ama xanuunnada keenaan waxa ka mid ah:
Dabayl baa martay qofkaas ama jin baa derderay.
Cawryo oo qofkaas hebel ama waa la cawryey.
Wadaado ayaa haya.
Macnaha guud ee xanuun waa caafimaad la’aan (fayoobi la’aan, saxo la’aan). Erayga xanuun wuxu ka soo jeedaa lana micno yahay erayga luqadda Ingiriisida loo yaqaan “Disease” kaas oo asalkiisu ka soo jeedo afka Franciiska (des-aise: absence of ease) taas oo macno ahaan noqonaysa maqnaanshaha sahlanaanta ama dhibyari/dhib la’aan. Xagga afka Carabigana wuxuu ku noqonaya Marad (مرض). Guud ahaan marka la qeexayo xanuun waxa lagu saleeyaa aragtida sayniska caafimaadka taas oo marka la soo koobo noqonaysa sidan hoos ku qoran:
Xanuun waa doorsoomid kasta oo qofka fayoobiddiisa/caafimaadkiisa waxyeello socota u geysata, lana daaweyn karo badankeeda. Sida ka muuqata tilmaantaas xanuun laguma sheegi karo dhib muddo gaaban qofka haya dabadeedna gudubta ama dhammaata, sida ilig dhacay, far go’oday, daqar begsadey/bogsooday iyo wixii la mid ah.
Sidaas darteed, xanuun waa xaalad caafimaad darro oo ku timaada xubnaha ama qaybaha jidhka, unugyada jidhka waxaana lagu gartaa oo lagu ogaan karaa calaamado iyo astaamo gaar ah ama guud oo ka muuqda ama uu dareemo qofka xanuunsanayaa. Waxa kale oo uu xanuun lagu sharrixi karaa “disorder” xaalad caafimaad darro oo aan caadi ahayn maskixiyan ama jismiyan, ladnaan la’aan tii ay ahaataba taas oo ku arooraysa qeexitaanka caafimaadka sidaan hore u soo sheegnay, ku noqo qeexitaanka caafimaadka ee WHO (Health definition).
Marka la soo koobo, xanuun wuxuu tilmaamaa oo muujiyaa marka khalkhal ku dhaco shaqada ama dhismaha jidhka dadka, xayawaanka iyo dhirta kaas oo noqon kara xanuun gaar ah oo oogada/jidhka oo dhan ama xubin gaar ah oo jidhka gudihiisa ah ku dhaca isla markaana sababi kara xaalad caafimaad la’aan ah ama geeri. Sidaa awgeed xanuun waa erayga (xaaladda) ka soo horjeedda (Opposite) caafimaad waxana sababa waxyaabo badan oo kala duwan iyo caafimaadka oo istaaga oo aan ku iman si shil ah.
Erayga xanuun wuxu leeyahay macne labaad oo ah xagga dareenka iyo sida qofka xanuunsanayaa u sheegto isla markaana dadka kale u arkaan xanuunkiisa. Macnahan labaad, xanuun waa dareen meel oogada ka mid ah aad ka dareento oo ay la kaarto ama wax ku rooraan, nabar ku dhacay ama waxyeello kale oo gaadhay darteed. Waa sida kaar, kaar dareemid, halac, xanuun yeelasho, xanuunid iwm. Waxa dareenkaas lagu jebiyaa daawada xanuunka bi’isa, xanuun bi’iye (Anti pain drugs).
Marka xanuunku qofka ka bixi waayo oo ku raago, ku soo noqnoqdo ama noqdo qof xanuun badan xanuunka noocaas ah waxa loo yaqaan bukaan. Bukaan waa qof bugta badan, jirroole ah oo inta badan xanuunsada.
Xanuun waxa micne ku dhow leh (synonym) ama isku macne dhow yihiin erayada ay ka mid yihiin: jirro, buka, bukaan, xanuunid, xanuunsan, cudur, qaba cudur, caafimaad darro, fayo qab la’aan, fiyoobi la’aan, cabasho caafimaad, dhib caafimaad, xaalad caafimaad iwm.
Guud ahaan xanuunka waxa sababa oo keena waxyaabo badan oo kala duwan sida dhaawaca, cudur, qaab nololeedka aan caafimaadka qabin oo qofka ka dhigi kara inuu xanuunsato (cabbista sigaarka iwm), nafaqodarrada iyo dhibaato ka timaadda xagga hiddaha ama isbeddel ku dhaca hiddosidayaasha. Qaybaha soo socda ayaynu kaga hadli doonno iyaga oo faah-faahsan haddi ilaahay ka dhigo.
Markaan intaas ku dhaafno xanuun waxan isweydiinaynaa, waa maxay cudur? Muxu kaga duwan yahay xanuun?
Cudur laftiisu waa caafimaad darro jidhka noolaha ama qayb ka mid ah ku dhacda waxana keena oo sababa jeermiska (germs) ama noolaha ili maqabatayga ah (microbes). Sidaas darteed, caafimaad waa cudur iyo xanuun (jirro) la’aan. Cudur wuxu noqonayaa xanuunada ay jeermisku keenaan oo keliya sidaa awgeed xanuunnada ku dhaca noolaha ee ay sababaan jeermisku waxa loo yaqaan cudur.
Guud ahaan dadka Soomaalidu intooda badani faham bay ka qabaan in cudurka khatartiisu badan tahay oo dhibaato weyn u geysan karto dadka iyo xoolahaba. Marka ay tilmaamayaan halista cudurka iyo in siyaabo badan oo kala duwan loo qaadi karo waxay isugu sheegaan tilmaamahan soo socda:
Sadhaysan oo cuduraysan laguna qaadi karo taabashada, isdhexgalka, dhunkashada, qufaca, hindhisada iwm.
Fadaraysan oo wasakhaysan cudurna laga qaadi karo sida biyaha, caanaha, hawada, cuntada, dharka sida tuwaallada iyo masarrada duufka la isaga bi’iyo, weelasha qofka xanuunsanayaa/buka wax ku cuno iwm.
Safmar oo saf/cudur baa nagu habsaday oo qof nagama taagna sida marka ay ku dhacaan carruurta ama dadka cudurada ay ka mid yihiin: durayga/hargabka, shubanka, jadeecada, duumada/dhaxanta, habla baaska, cabeebka iyo cudurada xoolaha ku dhaca sida sambabka iyo dhukaanka iwm.
Erayga cudur wuxu ka soo jeedaa lana macno yahay erayga luqadda Ingiriisida loo yaqaan “Infection” afka Carabigana ku noqonaya Eudwaa (عدوى). Sidaan soo sheegnay cudurka waxa sababa ama keena jeermiska (germs) oo keliya. Jeermiskuna waa noolaha yar ee ili maqabatayga (ilima-aragtay) ah ee aan lagu arki karin isha oo keliya ee lagu arki karo weynaysada (microscope). Noolahaas ilima-aragtayga ah waxa afka qalaad loo yaqaan microbes (microorganisms) waxayna ka kooban yihiin noocyo kala duwan sida bakteeriyada (bacteria), fayraska (viruses), fangaska (fungi), deris ku noosha (parasites) iwm. Jeermiska oo dhammi ma wada sababo cudurada ee qaar ka mid ah baa keena cudurka kuwaas oo loo yaqaan cudur dhaliyeyaal (pathogens).
Xanuunada ay sababaan jeermisku waa qaar aan faafin iyo kuwo faafa. Kuwa faafa ee la kala qaado waxa loo yaqaan cudurada faafa (Infectious diseases or communicable diseases). Waxan ku soo koobi karnaa, cudur waa xanuun gaar ah oo jeermisku keeno kana mid ah noocyada ama qaybaha xanuunada, isla markaana cudur wuxu hoos tegaya xanuunka oo ah ka guud ama xaaladda aan caafimaadka qabin ee saamaysa jidhka iyo nafta aadanaha.
Waxa kale oo muhiim ah in maskaxda lagu hayo inaan xanuunada oo dhan aanay sababin oo keenin jeermis. Laakiin xanuunada badankooda waxa sababa waxyaabo kala duwan sida nafaqodarro, dhaxaltooyo, cillad ku timaadda xubnaha jidhka, kansarka, saamaynta deegaanka, qaab nololeedka, iwm. Halka dhammaan cudurada oo dhan kuwooda faafa iyo cudurada aan faafinba ay sababaan oo keenaan jeermiska oo ah noolaha ilima aragtayga ah (microbes).
Xanuunku waa xaalad waxyeello taban u geysata sida jidhka dadka ama nooluhu u shaqeeyo. Taas oo sababta isla markaana keenta in jidhku shaqadiisa caadiga ah joojiyo. Qofka xanuunsanayaa wuxuu sida caadiga ah muujiyaa calaamadaha iyo astaamaha xanuunka kuwaas oo caddaynaaya in wax ka khaldan yihiin. Xanuunku wuxu sababi karaa xanuun, bukaan iyo cudur mararka qaarkoodna wuxu horseedi karaa dhimasho ama geeri. Xanuunada waxa ka mid ah: macaanka, kansarka, dhiig karka, xanuunada wadnaha, Qaaxada iyo xanuuno badan oo aadamaha ku dhaca.
Xanuunada ay keenaan jeermisku waxa loo yaqaan cudur, sidaa darteedna cudurka waxa sababa jeermiska. Cudurku wuxu yimaaddaa marka jeermisyada cudur dhaliyayaasha ahi (pathogens) ay jidhka soo galaan dabadeedna ku koraan kuna tarmaan si ay u sababaan xanuunka ah cudurka. Jeermisku, jidhka ayay weeran ku qaadaan ama abbaaraan waxaana qofka xanuunsanayaa muujiyaa calaamadaha iyo astaamaha cudurka sida xumadda, kaarka, xanuunka, gariirka iyo waxyaabo kale oo lagu garto cudurada.
Cuduradu, waxay ka kooban yihiin qaar aan faafin sida cudurka ku dhaca kaadi mareenka (urinary trac infection), ka ku dhaca cunaha (throat infection), qaar ka mid ah cudurada ku dhaca maqaarka (skin infections) iwm. Cudurada faafa (infectious diseases/communicable diseases) waa kuwa la is qaadsiiyo ee u kala gudba qof ilaa qof, sidaa darteedna bulshada dhexdeeda ku faafa. Cudurada faafaa, waa kuwa adduunka ugu dhibta badan iyo waxyeellada darranna u geysta dadweynaha waxaana ka mid ah: cudurada galmada (sida AIDSka, xabbadda/waraabow, jabtida), Qaaxada, Daacuunka, Qoorgooyaha, Duumada iyo kuwo kale oo badan.
Sidaa awgeed, waxa wanaagsan in aad looga fiirsado marka laga hadlayo ama wax laga qorayo magacyadan (xanuun iyo cudur) si aanay arrintaasi u keenin ismaandhaaf iyo farriin khaldan. Waxa loo baahan yahay in lagu isticmaalo magac walba halka uu adeegsigiisu ku habboon yahay.